Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Ireland | Thenga Uhlu lweselula | Database lakamuva
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Ireland
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Ireland
Izinombolo zefoni yase-Ireland
Uhla lwezinombolo zocingo lwebhizinisi lase-Ireland lufaka yonke i-CEO yebhizinisi lase-Ireland, i-CFO, umnikazi webhizinisi, umongameli webhizinisi, usihlalo webhizinisi, umphathi, umongameli oyiphini kanye nenombolo yocingo lomuntu oxhumana naye. Futhi ungahlunga uhlu lwakho lwebhizinisi lase-Ireland ngohlu lwezinombolo zeselula noma uhlu lwezinombolo zocingo. Lonke uhlu lwezinombolo zocingo luvuselelwa futhi luqinisekisiwe.
Database lakamuva Lokuposa likunikeza ukuhola kwefoni ye-b2b e-Ireland I-Database yakamuva Yokuposa ngumboneleli wezinamba zefoni odumile emhlabeni. Ithimba lethu labakhi bezinombolo zeselula libuye lenze umuntu wakho othize noma ohlosiwe noma umkhondo wefoni oxhumana naye ohola.
Thenga izinombolo zefoni yamabhizinisi ase-Ireland
Uhlu lwefoni yebhizinisi lase-Ireland luhlu oluyiqiniso lohlu lwefoni oluvela e-Ireland. Le mininingwane inesethi ehleliwe yabemukeli engathola kuphela lolu hlu lwebhizinisi olusebenzayo futhi oluqinisekisiwe e-Ireland olufakwe ohlwini, indlela elula futhi esheshayo yokuthola uhlu lwefoni lwebhizinisi elifanele.
Uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-Ireland luqhamuka eDatabase Lokumiswa Kamuva Kwemibhalo liqukethe amarekhodi anembile angama-25,000 ohlu lwezinombolo zebhizinisi afinyelela ku- $ 1050, ngemali ekhokhelwa ngasikhathi sinye kanye nesoftware engenzekayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Idathabheyili Yokugcina Yamahhala inokubaluleka kokuhlinzeka ngokufinyelela okulula, okusheshayo, amabhizinisi amaningi ongawafinyelela ukuze wena noma inkampani yakho imake kalula. Ngakho-ke, lokhu kungenza insiza yamakhasimende isheshe ngangokunokwenzeka, ukwenza inkampani yakho itholakale kakhulu futhi ngokuqhubeka nokwenza ngcono kanye nokuphumelela kwebhizinisi lakho.
Database Lokugcina Lokuposa lwenziwe ngempela futhi lwacwaningwa ngabantu bethu ikakhulukazi ukuqondisa izimakethe nokwenza inkampani yakho itholakale kakhulu kubantu noma izinkampani ezivela ezweni lase-Ireland. Ngokunikezwa iqiniso lokuthi ibhizinisi lakho lidinga inombolo yocingo evuselelwe yendawo ngayinye eqondisiwe, isidingo sokuthola izinombolo zamahhala zenqwaba kuyinto eseqhulwini. Ngakho-ke, lapho uthenga okuthe xaxa ngentengo ephansi, kulapho izinzuzo zakho zebhizinisi lakho ziba zinkulu khona.
Izinombolo zebhizinisi lase-Ireland Ibhizinisi Umbuzo & Impendulo